Gudoomiyihii gobolka Gedo oo xilka wareejiyey ka dib cadaadis kaga yimid DF | Allbanaadir.com
Home JUBALAND Gudoomiyihii gobolka Gedo oo xilka wareejiyey ka dib cadaadis kaga yimid DF
Gudoomiyihii gobolka Gedo oo xilka wareejiyey ka dib cadaadis kaga yimid DF
Guddoomiyihii xilka laga qaaday ee Gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji (Macalimu) ayaa xilka ku wareejiyey gudoomiyaha cusub ee gobolkaas.
Warar shalay u soo baxay ayaa sheegayay in Macalimu diidan yahay xil wareejinta, isla markaana uu ka xumaaday qaabka loola dhaqmay, isagoo sheegay inuusan aqoonsaneyn Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland ee xilka ka qaaday, kaasoo horey uga goostay Axmed Madoobe.
Balse waxaa arrinta soo dhex galay Madaxda dowladda Soomaaliya oo wadahadal dheer ka dib ku qanciyey inuu xilka wareejiyo.
Xil wareejiinta ayaa ahayd mid muuqaal laga duubay, waxaana ka muuqatay inay ka dhacday goob Guri ah, iyadoo aysan cidna ku wehlin Guddoomiyihii hore Cismaan Nuur Xaaji (Macalimu) iyo guddoomiyaha cusub Axmed Buulle Gareed (Canjeex).
“Lix degmo, saddex degaan ayaa wada shaqeynaya oo dowladda Federaalka ay maamushaa, waxay noo tahay farxad inaan halkan soo gaarsiino. Waxaan ku shaqeynyay awaamiirta dowladda ayey ahayd, mar haddii aan go’aansaday inaan xilka ku wareejiyo saaxiibkey” ayuu yiri Guddoomiyihii hore Cusmaan Macalimu.
Previous articleMusharaxa Bobi Wine oo shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii Ugandha
Next articleDhul-gariir Khasaare xoogan geystay oo ku dhuftay Jasiirada Sulawesi (Sawirro)